विभिन्न जिल्लामा यसरी सुरु हुनेभाे ज्यापु दिवस , — Imandarmedia.com
२प्रधानमन्त्रीलाई २० हजार जरिवाना, यस्तो छ कारण
३माधव नेपालले यसरी गरे देशभरका आफ्नै नेता कार्यकर्ताको घोर अपमान
४भारतमा एकैदिन भेटिए झण्डै डेढ लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित
५रूपन्देहीलाई हराउँदै पञ्जाव पुलिस विराट गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
६सकियो तीन दलको बैठक
७बुढानीलकण्ठमा शुरु भयो तीन दलको बैठक
८२८८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
९जब बूढानीलकण्ठ हिँडेका जसपाका नेताहरु बीच बाटोमै बैठक बसे
१०ओलीलाई साथ दिनेहरु दास हुन- माधव नेपाल
११ओलीलाई हटाउन सबैले लाग्नुपर्छ- देउवा
१२माओवादीले गृहमन्त्री बादललाई पनि गर्‍यो कारबाही
विभिन्न जिल्लामा यसरी सुरु हुनेभाे ज्यापु दिवस ,
काठमाडैँ । विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका नेवारहरूको सङ्ख्या १३ लाख २१ हजार ९३३ छ । यो कुल जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशत हो । नेवारमध्ये पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा ज्यापु जातिको सङ्ख्या रहेको छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई मुख्य बस्ती बनाएका यहाँका आदिवासी, मूल रैथाने, आफ्नै संस्कृति, संस्कार र रीतिरिवाजमा जीवनयापन गरिरहेको समुदाय ज्यापु जाति हो । विशेष रूपमा कृषि तथा किसानी कार्य गर्दै आएका ज्यापु जातिभित्र पनि महर्जन, डङ्गोल, प्रजापति, सुवाल, दुवाल, अवाले आदि विभिन्न थर समाविष्ट छन् ।
ज्यापु शब्दको व्युत्पत्ति खोज्दै जाँदा जयस्थिति मल्लकालीन नेपाल संवत् ५०० (अहिले नेपाल संवत् ११४१ चलिरहेको छ) को न्यायविकासिनी ग्रन्थसम्म पुग्न सकिन्छ । यसको पत्र ३९ ख मा ज्यापु शब्दको व्युत्पत्ति जनाउने प्रसङ्ग यसप्रकार पाइन्छ–
ज्यापोमियांतन ज्यापयकोस्यं ज्याजं बिस्यंततोत
आदिन अततोबुं निष्ठयाङ अवंकन ज्याप यंज
माल्व ।। मिसके ज्याजंकास्यंताव मनिस्तरंप मव्यंग्व”
‘ज्या’ (काम) र ‘पो’ (वा ‘पु’) अर्थात् रोप्ने काम गर्ने मानिसलाई ज्याला दिइसकेपछि खेतको राम्रो रोप्ने काम गर्नुप¥यो । मानिसले ज्याला लिएपछि खेतको देखभाल नगर्नु राम्रो होइन । न्यायविकासिनी मा अर्को प्रसङ्गमा ‘ज्यापे’ शब्द क्रियार्थक शब्दको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । ‘ज्यापो’ शब्द संज्ञा हो भने आजभोलिको ज्यापु शब्दको आदिशब्द ‘ज्यापोमि’ हो । यसको ‘मि’ प्रत्यय बिलाएर ‘ज्यापो’ वा ‘ज्यापु’ हुनगएको हो । ‘ज्या’ (काम) दिने मालिक, साहु आदिकोमा तोकिएको ज्याला लिई काम गर्नेलाई ज्यापोमि वा ज्यापु भन्ने गरिएको हो । न्यायविकासिनी ग्रन्थमा यिनीहरूको ज्यालासमेत निर्धारण गरिएको छ । ज्याला लिएर काम गर्ने भए पनि यिनीहरू दासदासी वा कमाराकमारीको रूपमा लिइएको छैन ।मल्लराजा जगज्योति मल्ल (नेसं ७३३–७५६) को समय ‘ज्यापोमि’ ‘ज्यापुमि’ हुन गयो । जगज्योति मल्लको एउटा गीतमा ‘ज्यापुमि’ शब्द रहेको छ । काम लिनुपर्दा ज्यापुमि खोजिहिँड्ने र काम सकेपछि ज्याला नदिने भावसहित ज्यापुमि शब्दको प्रयोग सो गीतमा पाइन्छ ।
यसैगरी काठमाडौँका अन्तिम मल्लराजा जयप्रकाश मल्लको एउटा गीतमा पनि ‘ज्यापुमि’ शब्द रहेको छ । सो गीतमा ज्यापुमिहरूले खेत हात नपरेसम्म देउता र धर्म साक्षी राखी अरूको खेतमा काम गर्छन् भनिएको छ ।यसप्रकार मल्लकालमा ज्यापोमि, ज्यापुमिको रूपमा ज्याला लिई काम गर्ने समुदायले राणाकालमा आएर एउटा जातिको आकार लियो । यस जातिभित्र महर्जन, डङ्गोल, सुवाल आदि जातले एकापसमा सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाई शुद्ध ज्यापु जातिभित्र आफूलाई समावेश गरे ।
भाबो र ज्यापु जातिभाबोले किसानी र किसानीसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने आम समुदायलाई बुझाउँछ । इतिहासमा ज्यापु शब्दभन्दा धेरै अघि भाबो शब्द देखिएको हो । भाबोलाई नेपालमण्डलका किसानी कार्यमा विकसित जाति ज्यापु भन्ने गरिन्छ । लिच्छविकालपछि सर्वप्रथम नेपाल संवत् २२४, २७२, ३३० का अभिलेखहरूमा भाबो शब्द देखिएको हो । यसप्रकार भाबो जातिका ज्यापुहरू धेरै पहिलेका तथा ज्यापुका अन्य जातभन्दा भाबोका अभिलेख धेरै पाइएको देखिन्छ । अभिलेखहरूको अध्ययनबाट अहिले ललितपुर त्यसवरपरका गाउँहरूमा रहेका ज्यापु जाति विशेषलाई सम्बोधन गर्न ‘भाबो’ शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ ।
ज्यापु दिवसको पृष्ठभूमबर्सेनि मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा (धान्यपूर्णिमा÷योमरि पूर्णिमा)को दिन ज्यापु दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । काठमाडौँको प्राचीन ३२ गू टोल (वर्तमान ६३ गू टोल)का ज्यापु जातिले सुरु गरेको ज्यापु दिवस अहिले राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको रूपमा देशैभरिका ज्यापुहरूको संयुक्त दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । विसं २०६० सालदेखि मनाउँदै आइरहेको यो दिवस यस वर्ष आजको दिन (पुस १५ गते) १७औँ राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको रूपमा मनाउँदैछ ।
२०५६ सालको मध्यावधि चुनावमा काठमाडौँ ७ नम्बर क्षेत्रबाट विजयी भएर तीर्थराम डङ्गोल गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए । आफ्नो नासःपूजाको गुठीभित्र वाद्यबाजाहरूको मर्मतको लागिसमेत पैसा उठाउनुपरेको ज्यापुहरूको नाजुक अवस्था मन्त्री डङ्गोलले देखेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यसँग ज्यापुहरूको नाजुक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव मन्त्री डङ्गोलले दिए । डङ्गोलको सुझावबमोजिम २०५७ सालको बजेटमा काठमाडौंका ६३ गू टोललाई प्रतिटोल २० हजारको दरले ज्यापुहरूको सम्पदा संरक्षणका लागि १२ लाख ६० हजार दिने घोषणा भयो ।
बजेटमा घोषणा त भयो तर त्यस रकमलाई दाबी कसले गर्ने भन्ने विषयमा फेरि विवाद पनि जन्मियो । त्योबेला काठमाडौँमा ज्यापु समुदायको एउटै मात्र संस्था ‘ज्यापु महागुथि’ सक्रिय थियो भने नेपाली काँग्रेसकै नेपाल किसान सङ्घ पनि ज्यापु जातिका चक्रमान डङ्गोलको अध्यक्षतामा रहेको थियो । नेपाली काँग्रेसकै सरकार रहेको र मन्त्री डङ्गोलको सुझावबमोजिम बजेट निकासा भएकाले चक्रमान डङ्गोल अध्यक्ष रहेको नेपाल किसान सङ्घ, काठमाडौँलाई बजेट दिन आफूले सिफारिस गरेको स्वयं पूर्वमन्त्री तीर्थराम डङ्गोल सम्झन्छन् । चक्रमान डङ्गोलको अथक प्रयासपछि बजेटको रकम हात परेपछि त्यसलाई अक्षयकोषको रूपमा बैङ्कमा राखी त्यसकै ब्याजबाट ज्यापु दिवस मनाउने विचारको जन्म लियो । तर त्यति थोरै रकमको ब्याज अपुग भएपछि दुई–तीन वर्षसम्म सो रकम बैङ्कमा रह्यो । त्यतिबेला चक्रमान र तीर्थराम डङ्गोलले ज्यापु समुदायको नाममा आएको बजेट खाइदियो भन्ने हल्लासमेत चलेको थियो । ज्यापु जातिको नाममा आएको रकम व्यक्तिको नाममा जाने असन्तुष्टि पनि उठेको थियो । यी असन्तुष्टिबीच २०६० सालमा चक्रमान डङ्गोलले ज्यापु दिवसको विचार साकार गर्न ‘ज्यापु संस्कृति विकास कोष’को स्थापना गरी त्यसकै अग्रसरतामा योमरि पूर्णिमाको दिन पहिलो ज्यापु दिवस मनाइयो । पहिलो ज्यापु दिवस काठमाडौँको परोपकार स्कुलमा भएको थियो भने त्यतिबेला बैङ्कमा रहेको १२ लाख ६० हजारको ब्याज ६३ टोलका ज्यापु समुदायमा वितरण गरिएको थियो । ज्यापु जातिको विकास र संवद्र्धनका लागि आएको बजेट ज्यापु समुदायभित्रै खर्चिन थालेपछि बाहिर देखिएका असन्तुष्टिहरू पनि मत्थर हुँदै गए ।
ज्यापु दिवस योमरि पूर्णिमाकै दिन किन मनाउनुप¥यो । यस विषय पनि थुप्रै चर्चा परिचर्चाहरू भएका थिए । ज्यापु संस्कृति विकास कोषका संरक्षकसमेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री तीर्थराम डङ्गोलका अनुसार नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यहाँको मुख्य बाली धान नै हो । चामलकै पिठोको योमरि बनाइन्छ । कात्तिकमा काटेको धान सुकाएपछि ढुकुटीमा भित्र्याएर अन्न पुज्ने दिन पनि योमरि पूर्णिमाकै दिनमा हो । त्यसैले यस पूर्णिमालाई धान्यपूर्णिमा पनि भनिन्छ । योमरि पूर्णिमा ज्यापु जाति विशेषको पर्व हो । पत्रकार रास जोशीका अनुसार योमरि पूर्णिमा कृषि क्रान्तिको प्रतीक पनि हो । बलभद्र (बलबल) राजाले चलाएको कृषि क्रान्तिलाई जनताले साथ दिएको सम्झनास्वरूप कृषक र अन्नको सम्मान गर्ने दिनको रूपमा यसलाई लिइन्छ । योमरि पूर्णिमाकै दिन अन्नलाई सम्मान गरी नयाँ धान पितृलाई अर्पण गरी किराँती समुदायले यसै दिन उधौली पर्व मनाउँदै आइरहेको छ । त्यसैले योमरि पूर्णिमा ज्यापु, किसानी र अन्नसँग सम्बन्धित विशेष पर्व भएकोले यसै दिन ज्यापु दिवस मनाइएको हो ।
सुरुमा ज्यापु दिवस कहिले परोपकार स्कुलमा तथा कहिले एकेडेमा त कहिले पर्यटन बोर्डमा ज्यापु टोलका थकाली, गुरु र संयोजकहरूको सम्मान गरी, तीन वर्षको एकपटक ब्याज वितरण गरी मनाउँदै आएको थियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारसामु चक्रमान डङ्गोलले ज्यापु दिवसलाई ‘राष्ट्रिय ज्यापु दिवस’को रूपमा बिदा दिइनुपर्ने माग राख्नुभयो । धान्य पूर्णिमा, योमरि पूर्णिमा र उधौली पर्वको रूपमा बिदा दिइँदै आएकोमा राष्ट्रिय ज्यापु दिवस भनेर बिदा तोक्न सरकारसमक्ष डङ्गोलले माग राखे । यस मागको सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री तीर्थराम डङ्गोलले गृहमन्त्रालय पुगी कृष्णप्रसाद सिटौलासमक्ष प्रस्ताव दर्ता गरे । प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिन नपुग्दै मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट ज्यापु दिवसलाई सरकारी मान्यता दिएर त्यसको बिदा दिने निर्णय भयो । सो निर्णय गजेटमा पनि प्रकाशित भयो । यसप्रकार विसं २०६५ सालबाट राष्ट्रिय ज्यापु दिवसले सरकारी मान्यता पनि पायो । राष्ट्रिय ज्यापु दिवस घोषणा भइसकेपछि यसलाई अब जनतामाझ लगी भव्य रूपमा मनाउने योजनाअनुरूप त्यो वर्ष काठमाडौँको मखन टोलले जिम्मेवारी लियो । मखन टोलका अध्यक्ष मङ्गल सिंहको नेतृत्वमा जनमानसमा गएर, सांस्कृतिक झाँकीसहित राष्ट्रिय ज्यापु दिवस भव्य रूपमा मनाइयो । यस दिन भएको विशेष कार्यक्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ प्रमुख अतिथिको रूपमा आएका थिए ।
ज्यापु दिवसको अवसरमा ज्यापु समुदायका प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्दै आइरहेको छ । सङ्गीत, नृत्य, शिक्षा, कलाकारिता, खेलकुद, पत्रकारिता आदि विविध १० क्षेत्रका उत्कृष्ट ज्यापुहरूलाई ज्यापु दिवसको अवसरमा १० हजार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिँदै आएको छ । पुरस्कारका लागि दिँदै आएको यो रकम पनि ज्यापु समुदायकै प्रतिष्ठित साहु महाजनबाट प्रायोजन हुँदै आएको छ ।
वर्तमान समय मखन टोलका नायः मङ्गल सिंह राष्ट्रिय ज्यापु दिवस समारोह समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । १२ लाख ६० हजारबाट सुरु भएको अक्षयकोष अहिले १ करोड पुग्नलागेको छ । अहिले ज्यापु समुदायलाई योगदान दिने ज्यापु समुदाय बाहिरकालाई समेत ‘ज्यापु प्रज्ञा पुरस्कार’बाट सम्मान गर्दै आइरहेको छ ।
ज्यापु समुदायको भविष्य उत्थानमा अग्रसर रही राष्ट्रिय ज्यापु दिवस अहिले काठमाडौँमा मात्र सीमित नरही देशैभरका ज्यापु समुदायलाई समेटेर अघि बढ्न कार्यपत्र तयार हुँदै गरेको जानकारी पनि पूर्वमन्त्री तीर्थराम डङ्गोलले दिनुभएको छ ।
निष्कर्ष ज्यापु जाति नेपालमण्डलका आदिवासी जाति हो । ज्याला लिई किसानी कार्य गर्ने ज्यापु जातिलाई भाबो, ज्योपोमि, ज्यापुमि सम्बोधन गरेको पाइन्छ । काठमाडौँको ६३ टोलका ज्यापु जातिलाई आएको बजेटको अक्षयकोष राखी त्यसकै ब्याजबाट योमरि पूर्णिमाको दिन ज्यापु दिवस मनाउँदै आएकोमा अहिले सरकारले मान्यता दिई राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसरमा बिदा समेत दिइसकेको छ । १२ लाख ६० हजारको अक्षयकोष एक करोड पुग्न लागेको छ । ज्यापु जाति, उनीहरूको संस्कृति, सम्पदा देशकै गौरव हो भने ज्यापु दिवस त्यसलाई जनमानससम्म पु¥याई ज्यापु समुदायको गौरव, प्रतिष्ठा उजागर दिने विशेष दिन बन्दै आएको छ ।
तीर्थराम डङ्गोल, संरक्षक, ज्यापु संस्कृति विकास कोष (२०७७ पुस ५) ।
जोशी, रास (२०७७), ‘योमरिको समाजशास्त्र’, नागरिक वर्ष १२ अङ्क २०६, २०७७ पुस ११, पृ. ४ ।
पञ्च, ज्यापु (२०५७), भाबो । भक्तपुर : कुतः पिकाकः ।
शर्मा, प्रयागराज (२०५४), कूल, भूमि, राज्य : नेपाल उपत्यकाको पूर्व–मध्यकालिक सामाजिक अध्ययन । कीर्तिपुर : नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।
सिं, तुलसीलाल (२०६६), ‘ज्यापु’, मतिना वर्ष ३, अङ्क ११, पृ. ३४–३७ ।